Izindlu zokuhlunga ze-VM ezivulekile ngokushesha eziningi - Umhlinzeki wezezindlu wase-China VM ovulekile osheshayo ovulekile, Factory -Sffiltech
Ikhaya » Imikhiqizo » Ukuhlunga kotshwala » Izindlu Zokuhlunga Izikhwama Eziningi
Izindlu zokuhlunga ze-VM ezivulekile ngokushesha
Ukuvulwa okusheshayo kwezindlu zokuhlunga zezikhwama eziningi - uchungechunge lweVM
VM uchungechunge lokuvula ngokushesha izikhwama zokuhlobisa izikhwama eziningi, ukugxila ekusebenzeni kahle nokuphepha kanye nokuqina kokuqamba kwabasebenzisi, okusetshenziselwa ukungcola okungaphezulu, izinto zokuhlunga zidinga ukushintshwa kaningi nokukhiqizwa okuqhubekayo nokushibilika kokushintsha, izindlu zokuhlunga ze-VM ziyithuluzi elibukhali ukwenza ngcono ukwenziwa komsebenzi. Ukufakwa esikhundleni se-Filter kuyashesha futhi kunokwethenjelwa, kunciphisa ngempumelelo umthelela wokuphazamiseka komkhiqizo obangelwe yizinto ezifakwayo, kuthuthukiswa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqizwa, ngasikhathi sinye, kunciphisa kakhulu ukuqina kwabasebenzi.
Umdwebo wokumboza wokuvula we-VM
Imizuzwana eshesha kakhulu engu-15 UKUZE / VULA indlu yokuhlunga, masishintshe ngokushesha into yokuhlunga;
ON / OFF esimweni esimisiwe, asikho isidingo sokuzungeza izindlu zokuhlunga ukuze uqinise i-nut;
Ngomklamo weketeni lokuphepha, ingcindezi yokuphelelwa amandla ukuvula indlu yokuhlunga;
Indlela yokuvula ibhalansi yokusiza yokusiza, umunwe owodwa ungacindezela kuze kufinyelele kunoma yiliphi i-angle elivulekile lingavulwa;
Isembozo esivulekile esivulekile, ubuningi be-compact bungalingana, bonga indawo yokufaka nezindleko zokufaka amapayipi;
Njengoba sinamathuluzi akhethekile wokufaka isikhwama esikhethekile esicindezelayo, ukusebenza okulula nomsebenzi;
Yehlisa isikhathi sokuphumula esifushane, ukhuthaze umkhiqizo futhi unciphise izindleko zokusebenza;
Ukukhethwa kwekhwalithi ephezulu ye-O yohlobo lwe-elastomer yokubeka uphawu, ukusebenza okuhle kakhulu kokubopha uphawu nesikhathi sempilo;
I-nut yethusi yenzelwe, intambo ayisasebenzi ngentambo, futhi ukuzungeza kusindisa isikhathi esithe xaxa nokulondolozwa kwabasebenzi;
Ingxenye ewuketshezi yenziwa ngensimbi engenacala, ukumelana nokuqina kokuqina okungcono kakhulu;
Izinhlobo eziyisishiyagalombili, ngokulandelana, izikhwama ezintathu, izikhwama ezine, izikhwama ezinhlanu, izikhwama eziyisithupha, izikhwama eziyisishiyagalombili, izikhwama eziyishumi nambili, izikhwama eziyishumi nesikhombisa, izikhwama ezingamashumi amabili nantathu;
Izinhlobo ezintathu zokungeniswa kokulinganisa nokungenisa okuthekelisa, design elula ukufakwa.
Ngemuva kwesikhashana, izinyathelo zokubuyisela zinjengokulandelayo:
Isinyathelo 1: vula insimbi yokuvala isikhala ukuze uqinisekise ukukhululeka kwengcindezi yokuvumelanisa.
Isinyathelo sesibili: ujikeleze ishafu ngesandla, uvule i-hoop ngokuphephile
Isinyathelo sesithathu: sebenzisa indlela esetshenziselwa ukulinganisa kwentwasahlobo ukuvula ikhava ephezulu.
Isinyathelo sesine: ukusetshenziswa kwamathuluzi wokuqinisa izindandatho, iringi lokujikeleza lendandatho evulekile
Isinyathelo sesihlanu: khipha isikhwama, uguqule esikhwameni esisha
Isinyathelo sesithupha: vala ikhava ephezulu
Isinyathelo sesikhombisa: zungeza ishafu ngesandla.
Isinyathelo sesishiyagalombili: vala insimbi yokuvala isikhala, faka isimo sokuqhubeka komsebenzi
Imininingwane yokupakisha: Ikhodi ye-HS: 8421392200 yezindlu zokuhlunga isikhwama 304/316 ketshezi
Imininingwane Yokulethwa: Kuthunyelwe ezinsukwini eziyi-7 ngemuva kokukhokha
Siphatha yonke imininingwane yendawo yokuhlala yensimbi engenasici, noma yingxenye eyodwa encane efisa ukulawulwa kwekhwalithi engcono kakhulu
Sinezindlu eziningi zensimbi ezingenasici ezingenazinsimbi ezingenziwa yileso naleso sigxila kwimininingwane emincane ukwenza ngcono ukulawulwa kwekhwalithi.
4.Asiwona kuphela umphakeli kepha sikhungo sokwaziswa esisodwa sawo wonke imboni yokuhlunga
Izinsiza & ubuchwepheshe
Ikhwalithi ye-5.Good ne-Certificationwe kudlule i-FDA, i-MSDS, i-ISO9001 nolunye uhlolo.
I-Sffiltech chungechunge lokuhlunga isikhwama sezinsimbi ezingenasici: isilinda sokuhlunga senziwe lula, ikhanda lokuhlunga nesakhiwo sokuvula esisheshayo, isikhwama sokuhlunga sensimbi engenasici sokuqinisa izingxenye ezinkulu ze-net.
Isihlungi yithuluzi lokuhlunga lendawo yokucindezela, uketshezi oluvela kwigobolondo lokuhlunga eceleni kokungena esikhwameni sepayipi nedivaysi ekuqiniseni inethiwekhi, ukufakwa koketshezi kudinga isilinganiso sokukhanya kwesikhwama okungaba isikhwama sokuhlunga esifanelekile izinhlayiya isikhwama semifanekiso yokuthwebula. Ukushintshwa kwesikhwama sokuhlunga kulula kakhulu, ngaphandle kokusetshenziswa kwesihlungi sezinto zokuhlunga.